Nagu saabsan - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
La aasaasay bishii Juun 2008, NewGenApps mid ka mid ah kuwa ugu horreeya hirgelinta teknolojiyada cusub. Waxa ka bilaabmay Horumarinta Codsiga Smartphone -ka iyo Xalalka daruuriga ayaa hadda u kala baxay Sirdoonka Artificial, Barashada Mashiinka, Falanqaynta Xogta Weyn iyo xalalka AR/VR sidoo kale.
At NewGenApps, waxaan ku dadaaleynaa inaan sii wadno bixinta xalalka IT-ga ee adag iyo codsiyada casriga ah ee casriga ah marka suuqa sii kordho. Iyada oo leh asal kala duwan oo IT ah iyo xirfado horumarineed oo xoog leh, kooxdayada khabiirku waxay si gaar ah ugu heellan tahay inay siiso macaamiisheenna adduunka oo dhan xalka farsamada ugu fiican. Shirkadda, oo ku bilaabatay 3 xubnood sanadkii 2008 waxay ilaa iyo hadda u adeegtay 900+ macaamiil waxayna si guul leh u dhammaystirtay 5000+ mashruuc.